Posted by Vanguard on July 30, 2021 .
1.Improved agility: Agility is particularly important to midsize companies with growth potential. These companies are often specialists in their industries, working inasmall, related set of industry verticals such as aerospace job shop metal fabrication or distribution service to restaurants. They have deep customer and vendor relationships. To grow rapidly, they need to seize opportunities – adding new locations, introducing new products and services, making acquisitions, or responding to competitor failures.
2.Visiblity into cash flow: In midsize companies, top management tends to be very cost conscious. Unlike larger companies that manage quarterly budgets, the lifeblood of medium businesses is cash flow – and improving profit margin is oftenatop priority. Building balance sheet reserves – and fueling growth – requiresacareful eye on working capital, operating expenses, and investments.
3.Ease of application integration: Midsize businesses have typically been quick to adopt point solutions for specific operational needs – such as call center software or field service systems – but slow to change their backbone ERP. However, adding these “bolt on” solutions has added great expense and complexity because these tools don’t easily connect to the ERP system. Now, modern cloud ERP is changing all of that – causing more and more growing companies to reevaluate their ERP choice. Increasingly, companies are opting for the easy integration, scalability, and agility that comes with cloud ERP.
Fast, flexible implementation:
Support for mobile ERP:
Posted in UncategorizedLeaveaComment on What Is Cloud ERP ?
Posted in UncategorizedLeaveaComment on Focus Five Things To Make A Successful ERP Implementation
Posted in UncategorizedLeaveaComment on လူကြီးမင်း၏ လက်လီအရောင်းဆိုင်အတွက် အကောင်းဆုံး POS Software ကို မည်သို့ရွေးချယ်မည်နည်း?
Posted in UncategorizedLeaveaComment on Business Transformation တစ်ခုက ဘယ်လောက် ခက်ခဲလဲ၊ ဒါကို Huawei က ဘယ်လိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့လဲ…
Posted in UncategorizedLeaveaComment on New Normal ကာလလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကို မည်သို့ကိုင်တွယ်အသုံးချနိုင်မည်နည်း?
Finance Director ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ CFO တွေအနေနဲ့ ယခုအချိန်မှာ strategy များရေးဆွဲခြင်း၊ Decision ချမှတ်ခြင်း နဲ့ Organization Transformation တွေမှာပါ ဦးဆောင်နေရပါတယ်။ ဒါတွေကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
လုပ်ငန်းတွေမှာ ဘာလို့ ခိုင်မာတဲ့ Finance Function တွေ လိုအပ်တာလဲ?
Financial Information တွေကို စောင့်ကြည့်၊ တိုင်းတာခြင်းတွေက လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အသက်သွေးကြော ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေ၊ ငွေကြေးချေးငှားပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တဲ့ CFO နဲ့ Finance Team ကို မျှော်လင့်ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာလည်း မတူကွဲပြားတဲ့ Governance နဲ့ Regulatory တွေဟာ အချိန်နဲ့အမျှ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် လုပ်ငန်းများစွာဟာ International Financial Reporting Standard ကဲ့သို့ စံသတ်မှတ်မှုမျိုးကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြပါတယ်။
လုပ်ငန်းတွေဟာ တိကျတဲ့ Financial Figure တွေကို ယခင်ထက်ပိုပြီး မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် ထုတ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အတွက် တိကျ၊ မြန်ဆန်၊ ချောမွေ့တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများအပါအဝင်၊ စိတ်ချရတဲ့ Integrated Reporting များစွာကို လိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒါကိုလုပ်နိုင်ဖို့ ဘာတွေ လိုအပ်လဲ?
ဘယ်လိုပဲ ပြဿနာ အသစ်တွေ ပေါ်လာပါစေ Capacity အသစ်တွေ၊ Capability တွေကို ယူဆောင်လာပေးနိုင်တဲ့ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေ ရှိနေတာကို ကျေးဇူးတင်ရပါမယ်။ Compliance, Reporting နဲ့ Business Process တွေကို Streamline လုပ်တာတွေ အပါအဝင် Digital Leadership ကို ရှေ့ပြေးအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးကိုပါ နည်းပညာက သယ်ဆောင်လာပေးနိုင်ပါတယ်။ Future Product, Service တွေနဲ့ Business Model တွေအထိပါ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ Insight တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီး အနာဂတ်အောင်မြင်မှုအတွက် မျိုးစေ့တွေကို ချပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ Platform ကို ရွေးချယ်ခြင်း
ရှုပ်ထွေးတဲ့ Financial Process တွေကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ Cloud ERP Solution တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SAP Business ByDesign ကို မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ SAP ByD ရဲ့ Financial စွမ်းဆောင်ရည်များစွာထဲမှ အဓိကအချက် (၁၀) ခုကို ထုတ်နှုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Core Business Process တွေကို Financial အထိ ပေါင်းစည်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကုမ္ပဏီရဲ့ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ စာရင်းတွေကို Single View အနေနဲ့ ပေးနိုင်ခြင်း၊
IFRS (International Financial Reporting Standard) နဲ့ IAS (International Accounting Standard) တို့လို နိုင်ငံတကာ Reporting Standard တွေနဲ့ ကိုက်ညီခြင်း၊
အစီအစဉ်တကျပြုလုပ်ထားတဲ့ Period-End Closing များကကြောင့် လချုပ်၊ နှစ်ချုပ်လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်အဟုန် မြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း၊
ပေးရန်ရှိ၊ ရရန်ရှိများစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်လည်စီးဆင်းမှုများ စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ကိုလည်း ပိုမိုထိရောက်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း၊
ရောင်းသူနှင့် ဝယ်ယူသူကြား ကြုံတွေ့နေရတဲ့ Business Process မှရရှိသော အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သောကြောင့် Cash Flow ကိုလည်း တိကျစွာ ခန့်မှန်းပေးနိုင်ခြင်း၊
ထို့ကြောင့်လည်း Cash Availability အပေါ် ထိန်းချုပ်မှု ပိုရရှိနိုင်ခြင်း၊
အချိန်နဲ့တပြေးညီ Anlytics တွေ ထုတ်ပေးနိုင်သောကြာင့် Management နှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချတ်များ မှန်ကန်စွာ ချမှတ်နိုင်ခြင်း၊
စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်တွေ တိုးမြှင့်ထားတဲ့ Reporting Tool တွေကို အသုံးပြုပြီး Stakeholder တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ Reportများ ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊
များပြားလှတဲ့ Operating Unit တွေအတွက် အထွေထွေလယ်ဂျာ Account တွေကို အသေးစိတ် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း၊
ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ စာရင်းစစ်စွမ်းရည်ကိုပါ တပါတည်း ရရှိနိုင်ခြင်း
ယခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ SAP ByD ရဲ့ အဓိကကျတဲ့ Financial စွမ်းဆောင်ရည်တွေဟာ သင့်ရဲ့ Decision-Making Journey မှာ တစိတ်တပိုင်း အထောက်အကူ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒီထဲက မည်သည့်အချက်ကိုမဆို အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက Vanguard Myanmar က ဆွေးနွေးပြောကြားပေးဖို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။
Posted in UncategorizedLeaveaComment on SAP Business ByDesign ရဲ့ အဓိက Financial စွမ်းဆောင်ရည် (၁၀)ချက်
စီးပွား‌ရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုလုံးရဲ့ ပြောင်းလဲမှုအတွက် စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်မျာအတွက်…
မိရိုးဖလာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို စတင်တော့မယ်ဆိုရင် ဘာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်လေ့ရှိကြလဲ။ ဘာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ လိုမလဲ။
မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းအများစုဟာ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေကို စတင်ဖို့ လက်တွန့်နေလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
အရင်တည်းက စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြလို့ စာရွက်စာတမ်းနဲ့လည်း အဆင်ပြေတယ်၊ အိုင်တီနည်းပညာ အကူအညီကို မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ကြတယ်၊ ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ ကီးပတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲ တောက်ေလျှာက် အသုံးပြုလာပြီး Feature တွေ၊ Function တွေ အစုံပါတဲ့ စမတ်ဖုန်းကို အသုံးမပြုရသေးတဲ့ သူနဲ့ တူပါတယ်။ (ယှဉ်ပြီး သုံးဖူးလိုက်မှ ဘယ်ဟာက ပိုပြီး လွယ်ကူအဆင်ပြေတယ်၊ အလုပ်တွင်ကျယ်တယ်ဆိုတာကို သိကြပါတယ်။)
နောက်တချက်က Risk မယူရဲကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂျစ်တယ်ပေါ် ကူးပြောင်းပြီးမှ အရင်က တည်ငြိမ်နေခဲ့တဲ့ လုပ်ငန်းနဲ့ အကျိုးအမြတ်ကို ကိုထိခိုက်မှာ စိုးတာပါ။
ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒီထဲမှာ Digital Transformation က အခက်ခဲဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
မိရိုးဖလာ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း ကနေ E-commerce ကို အောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ Story တစ်ခု လေ့လာကြည့်ပါမယ်။ ဒီလုပ်ငန်းကရော ဘယ်လို စိန်ခေါ်မှုတွေကို ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီး ဘယ်လို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသလဲ… ?
လုပ်ငန်း A ကို မြန်မာ့ရိုးရာစားသောက်ကုန် မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီး ပထမမျိုးဆက်ဆီကနေ သားသမီးဖြစ်သူ ဒုတိယမျိုးဆက် ကို လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းရဲ့ အရည်အသွေးကို မျိုးဆက်တစ်ခုအထိ ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး တစတစ လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာချိန်မှာ စိန်ခေါ်မှုအချိုု့ ကို ဒုတိယမျိုးဆက်တွေမှာ အမြဲလိုလို ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိပါတယ်။
မိရိုးဖလာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းရဲ့ နောက်ပိုင်းမျိုးဆက်တွေတိုင်း ကြုံတွေ့ရတဲ့ ဖိအား ဒါမှမဟုတ် Responsibility လို့ ယူထားတဲ့ အချက် (၂)ချက် ရှိပါတယ်။
နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ မိဘပိုင်လုပ်ငန်းကို မိမိ လက်ထက်မှာလည်း ဆက်ပြီးတည်တံ့နေအောင် ထိန်းထားနိုင်ဖို့ပါ။
နံပါတ် (၂) က မိမိ လက်ထက်မှာ လုပ်ငန်းကို ပိုကောင်းတဲ့ အနေအထားနဲ့ နောက်မျိုးဆက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအချက် (၂)ချက်လုံးအတွက် အကောင်းဆုံး အဖြေက မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းကနေ E-commerce ကို ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုတာကို လုပ်ငန်း A ရဲ့ ဒုတိယ မျိုးဆက်ဖြစ်သူက ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယမျိုးဆက် အနေနဲ့ E-commerce ကို ပြောင်းလဲနေစဉ်မှာ စိန်ခေါ်မှုတွေကို စတင် ရင်ဆိုင်ရပါတယ်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကပဲ လုပ်ငန်း A ကို E-commerce ကို လျင်လျင်မြန်မြန် ပြောင်းလဲစေနိုင်ဖို့ တွန်းအားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး စိန်ခေါ်မှု။ ။Business Operation များကို ပြောင်းလဲခြင်း
မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းအများစုရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ငန်း A ရဲ့ Operating Procedure တွေကို စာရွက်စာတမ်းတွေ (Paper Process) ပေါ်မှာပဲ လက်ရေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ စာရွက်စာတမ်းတွေက ပျက်စီးလွယ်ပြီး အချက်အလက်တွေ လုံခြုံမှုမရှိဘူး၊ အချိန်နဲ့တပြေးညီ အချက်အလက်တွေ မရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ သိထားကြပါတယ်။ Paper Process တွေက လုပ်ငန်း A ကို ကြန့်ကြာစေပြီး လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လုပ်ငန်း A ကို E-commerce ကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက် Paper Process တွေနေရာမှာ Digital Tools/ Solution တွေ အစားထိုး ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ အော်ဒါလက်ခံတာက စပြီး လုပ်ငန်း A ရဲ့ စားသုံးသူ (Customer) တွေဆီ အော်ဒါပို့ဆောင်တာ၊ Customer Review တွေ၊ Complaint တွေကို ဖြေရှင်းတာအထိ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို Document လုပ်ပါတယ်။ အဆင့် တဆင့်ချင်းစီတိုင်းမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Business Operation တွေထဲက Automation သုံးလို့ရမယ့် Operation တွေကို Tools တွေ အကူအညီနဲ့ အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်စေပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အရင်လက်ခံနေကြ အော်ဒါ အရေအတွက်ကိုပဲ ဝန်ထမ်း ဦးရေနည်းနည်းနဲ့ ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင် နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒုတိယ စိန်ခေါ်မှု ။ ။ IT Team
Digital Server လုပ်ဖို့၊ Monitor လုပ်ဖို့ လုပ်ငန်း A ရဲ့ IT Team မှာ လူအင်အား နဲ့ နေရာအလုံလောက် မရှိတာကလည်း စိန်ခေါ်မှု တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အသေးစားနဲ့ အလတ်စား လုပ်ငန်းတွေအတွက် In House Server ထားရတာ ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ ယူဆထားကြပေမယ့် တကယ်တမ်းမှာ
IT Team အတွက် လူအင်အားနဲ့ Server တွေအတွက် နေရာပေးရတယ်။ Server တွေထားဖို့ အဆောက်အအုံ (Physical Infrastructure) နဲ့ Hardware တွေ အတွက် အရင်းအနှီးများတယ်။
ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန် (ငလျင် နဲ့ ရေကြီးခြင်းတို့လို (Disaster Situation) မှာ Data တွေကို ဆုံးရှုံးရနိုင်ချေ များပါတယ်။ Data တွေကို ဘယ်လို လုံခြုံတဲ့နေရာမှာ သိမ်းမလဲဆိုတာအပေါ် အများကြီး မူတည်နေပါတယ်။
ဖော်ပြပါ စိန်ခေါ်မှုတွေကို လုပ်ငန်းကြီးထွားလာနဲ့အမျှ ကြုံတွေ့လာရပါတယ်။
Cloud Infrastructure ကို အသုံးပြုပြီး လူအင်အားနဲ့ နေရာ Capital Expense တွေဖြစ်တဲ့ Physical Infrastructure နဲ့ Hardware ကုန်ကျစရိတ် Disaster Recovery စတဲ့ Issue တွေကို ပြေလည်သွားစေပါတယ်။ Storage နဲ့ Structure ကို အလွယ်တကူ ထပ်ထည့်နိုင်ပြီး Downtime ကို လျှော့ချနိုင်ကာ Business Operation တွေကို အရင်ထက်ပိုပြီး ‌ချောမွေ့အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံး စိန်ခေါ်မှု။ ။ Customer Behavior ပြောင်းလဲခြင်း
Customer Behavior သိသိသာသာ ပြောင်းလဲခြင်းကို (၂၀၁၉) နှောင်းပိုင်းမှာ ပိုပြီးကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ Covid-19 Crisis ကလည်း လုပ်ငန်း A အပေါ်မှာ သက်ရောက်မှု အများအပြား ရှိခဲ့ပါတယ်။ Consumption သိသိသာသာ လျော့ကျခဲ့ပြီး Supply Chain မှာ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တာတွေ ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
Consumption ကို ပြန်လည်မြှင့်တင်ဖို့ Digital Platform တွေ (Facebook သို့မဟုတ် Website Page)ကနေ Customer တွေက လုပ်ငန်း A ရဲ့ Product တွေကို အလွယ်တကူ ဝယ်ယူစေနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ပြောင်းလဲလာမယ့် New Normal အတွက်လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်စေဖို့ Digital Buying အတွက်လည်း ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဒီစိန်ခေါ်မှု (၃)ခုလုံးကို ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အတွက် Solution တွေရဲ့ အခြေခံ Foundation ဖြစ်တဲ့ Cloud Infrastructure ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ စိန်ခေါ်မှု နံပါတ်တစ် ဖြစ်တဲ့ Business Operation တွေကို ပြောင်းလဲရာမှာ Business Solution တွေအကူအညီကို ရယူတဲ့အခါ ဒီ Tools/Solution တွေကို Run နိုင်ဖို့ Foundation ဖြစ်တဲ့ Cloud Infrastructure က များစွာ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ E-commerce ကို ပြောင်းလဲတဲ့အခါ မဖြစ်မနေစဉ်းစားရပြီဖြစ်တဲ့ IT Team လူအင်အားနဲ့ Server ထားဖို့နေရာတို့အတွက်လည်း Cloud Infrastructure က အဓိက Solution ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Experience ကောင်းကောင်းနဲ့ Digital Platform ပေါ်ကနေ လုပ်ငန်း A ကို Run နိုင်တဲ့ အခါ Customer တွေကို Buying Process မှာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့ စွာ ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီး ရောင်းအား တက်လာစေဖို့ Cloud Solution က ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လုပ်ငန်း A အနေနဲ့ E-commerce ကို ပြောင်းလဲရာမှာ အခြေခံဖြစ်တဲ့ Cloud Infrastructure ကို အရင် မပြင်ဆင်မိခဲ့တာကြောင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခဲ့တာမျိုးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိရိုးဖလာလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ အခြေခံ Foundation ဖြစ်တဲ့ Cloud Infra ကို ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့ လုပ်ငန်း A ရဲ့ Story ကနေ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
Posted in UncategorizedLeaveaComment on မိရိုးဖလာ လုပ်ငန်းကနေ E-Commerce ကိုအောင်မြင်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
Business Transformation လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ ဘာကို အရင်မြင်ပါသလဲ?
Digital Transformation ကို အရင်မြင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းစု၊ အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက် Business Transformation ဆိုရင် IT Transformation ကလည်း အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ IT Transformation အတွက် Cloud ကို အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးအချက်က သင့်လုပ်ငန်းမှာ သုံးမယ့် cloud ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
မိမိလုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Cloud Service တစ်ခုကို အသုံးမပြုခင် စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။ သင့် လုပ်ငန်းရဲ့ Goal အသစ်တွေ (ဥပမာ – စျေးကွက် အသစ် ဖောက်ချင်တာ၊Skillful ဖြစ်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲ Business ကို ဆက် run ချင်တာ) စတာတွေကို ချမှတ်လိုက်ပြီဆိုရင် ဒီ Goal တွေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်းကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲ လုပ်ဆောင်မလဲ ဆိုတဲ့ Business Transformation ကို အရင်ဆုံး စဉ်းစား သင့်ပါတယ်။ Business Transformation အပိုင်းပြီးမှ ဘယ်လို IT Support တွေပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့ IT Transformation အပိုင်းလာပါတယ်။
လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် ပြည့်စုံတဲ့ IT Transformation ဖြစ်ဖို့ အဓိက အကြောင်းအရင်း (၅) ခု
Business Process တွေကို အရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး IT Transformation ကို‌ အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အဓိက အကြောင်းအရင်း (၅)ခု ရှိပါတယ်။
လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့ Process တိုင်းမှာ ထောင့်စုံအောင် Cloud ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်တယ်။
တိကျသေချာတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုစည်းပြီး Decision တွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ ချမှတ်တယ်။
ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ Risk တွေအတွက် သေချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ အသေးစိတ် Plan ရှိတယ်။
Customer တွေ ဘယ်နေရာမှာပဲ ရှိနေ ရှိနေ အမြဲတမ်း ဆက်သွယ်နိုင်တယ်။
IT ကို ပိုပြီး Efficient ဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်အောင်၊ ကုန်ကျစရိတ်တွေ လျှော့ချနိုင်အောင်နဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်အောင် စိစစ်လုပ်ဆောင်နိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက Cloud ကို ကုန်ကျစရိတ် တစ်ခုအနေနဲ့ မြင်တတ်ကြပါတယ်။ တကယ်က Cloud ဆိုတာ Tool တစ်ခုဖြစ်ပါ။ မိမိလုပ်ငန်းကို ပိုပြီး တိုးတက်မြန်ဆန်စေဖို့၊ ရေရှည် IT ကုန်ကျစရိတ် ချွေတာဖို့၊ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက်အပြင် အခြားအကျိုးရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။Cloud ကို အသုံးပြုုပြီး သင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအတွက် ကြီးမားတဲ့အကျိုးရလဒ်က ရနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို သေချာ ရှင်းသွားပြီဆိုရင် Cloud အသုံးပြုတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ဟာ အကျိုးရှိတဲ့ (Cost Effective) ကုန်ကျစရိတ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Cloud ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ Integration လုပ်ပေးမယ့် Vanguard Myanmar လိုမျိုး Professional Team ကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ဖို့လည်း လိုပါတယ်။ တခါတလေမှာ Data တွေကို အသုံးပြုတဲ့ Policy ဒါမှမဟုတ် Legal Requirement (ဥပမာ – Health Care Centre လိုမျိုး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းက တင်းကျပ်တဲ့ Data စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ) တွေအတွက် Dataတွေကို စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ဆိုတာ သင်ရွေးချယ်တဲ့ Team ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ Cloud ပေါ် မရွှေ့ခင် Data တွေရဲ့ Legal Requirement တွေကို ကောင်းစွာနားလည်တဲ့ VCS လိုမျိုး Provider တွေကိုသာ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ Strong In-house IT Team မရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွက်လည်း ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။
ဒါကြောင့် သင့် Business Transformation အတွက် Cloud ကို သုံးဖို့ စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် အရေးကြီးဆုံးအချက်က ကိုယ်က ဘယ်လို ပြဿနာမျိုးကို ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေလဲဆိုတာကို သိထားဖို့ပါပဲ။
Vanguard Cloud Services အကူအညီနဲ့ သင့် Business Transformation ကို အထိရောက်ဆုံး လွယ်ကူအဆင်ပြေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ခုပဲဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Posted in UncategorizedLeaveaComment on Cloud ကို မှန်ကန်စွာ အသုံးချပြီး သင့် Business Transformation ပြုလုပ်ပါ။
Posted in UncategorizedLeaveaComment on RPA အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်သောအချက် (၅) ချက်
Posted in UncategorizedLeaveaComment on လက်လီရောင်းချခြင်း၏ Digital အနာဂတ်